दु :खद खबर कोटेश्वर सडकखण्डमा एक पुरुषको सवारी साधनको ठ,क्करबाट मृ;त्यु, पहिचान खुलेन, को होलान् उनी? – NepalajaMedia
दु :खद खबर कोटेश्वर सडकखण्डमा एक पुरुषको सवारी साधनको ठ,क्करबाट मृ;त्यु, पहिचान खुलेन, को होलान् उनी?
January 29, 2021 104
उपत्यकामा सवारी दु’ र्घ’ टनामा एक जनाको मृ;त्यु भएको छ । उनलाई मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली–कोटेश्वर जाने सड कख ण्डमा सवारी साधनले ठ’ क्क’ र दिएको थियोशवको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सवारी साधनको ठ’ क्क’ रबाट मृ;त्यु भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले ठ’क्क’ र दिने सवारी साधनको खोजी गरिरहेको छ ।
मृ,तकको सनाखतका लागि आफन्तको पहिचानको प्रयास भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिएका छन् ।अन्दाजी ५० वर्षीय पुरुषको साथमा परिचय खुल्ने कुनै पनि कागज नभेटिएकाले मृ,तकको पहिचान हुन नसकेको जानकारी दिँदै उनले कालो धर्के सर्ट, कालो ट्राउजर र खैरो जुत्ता लगाएका उनको पैदल हिँड्ने क्रममा आज बिहान सवारी साधनले ठ’ क्क र दिँदा मृ;त्यु भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।बिहिबार सडकमा लडिरहेको पुरुष देखेर प्रहरीले उपचारका लागि मध्यपुर अस्पताल पु-याए पनि मृ;त्यु भइसकेको अस्पतालका चिकित्सकले जानकारी गराएका थिए ।
यो पनिपढ़नु होस:को’लेस्ट्रोल बढेपनि देखिन्छ आँ’खाको वरिपरी यस्तो दा’ग, यसरी पाउनुहो’स् राह’त
जब श’रीरमा को’लेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न लाग्छ, तब त्यसको अ’सर अनुहारमा देखिन थाल्छ । शरीरमा को’लेस्ट्रोल जम्मा हुँदा आँ’खाको वरिपरी सेतो सेतो दाग देखिन थाल्छ । आँ’खाको आसपास कोलेस्ट्रोल जम्मा हुने स’मस्यालाई डायस्लिपिडेमिया पनि भनिन्छ ।
जुन एलडिएल को’लेस्ट्रोल बढेका कारण हुने गर्दछ। जुन हाम्रो स्वा’स्थ्यका लागि हा’निकारक हुन्छ । आँखाको वरीपरि जम्मा भएको कोलेस्ट्रोलले अ’नुहारको सुन्दरता बढाउने काम गर्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईले केही घरेलु उपायको प्रयोगबाट आँखामा जम्मा भएको को’लेस्ट्रोल कम गर्न सक्नुहुनेछ ।
कालो धब्बा आफैमा छालाको रं’ग होइन, बरु रगत र पानीको प्रवाहको कम हो,’छाला विज्ञ जस्टिन हेक्सटल भन्छिन् । दिनमा यस्ता धब्बा अझै स्पष्ट देखिन्छ । सुख्खा हुँदा यस्तो धब्बा झनै देखिन्छ ।
‘जब तपाईको शरिर सुख्खा हुन्छ वा शरिरमा पानीको मात्रा न्यून हुन्छ छालाको आधारभूत पत्र अर्थात् डर्मिसमा र’गत र पानीको प्रवाह न्यून हुन्छ । अनि भित्री छाला प्रष्ट रुपमा कालो देखिन्छ’,उनी भन्छिन् ।
Nextयी हुन् यौ ,न सन्तुष्टिको लागि जान्नै पर्ने ५ कुराहरू
विश्वका सर्वाधिक धनी १ प्रतिशतले अति गरीबको भन्दा ५० गुणा बढी प्रदूषण फैलाए : विश्लेषण